बोनस एक्स्प्रेसमा हामी यो लोकप्रिय स्क्रैच कार्ड खेल प्रस्ताव गर्यौं समुद्रलाई जंक गर्नुहोस्। लन्डन सिक्न धेरै सजिलो छ र डिजाइन र ग्राफिक्सले तपाईंलाई आराम गर्न र एकैचोटि उत्साहित हुने छ। जब तीन म्याचहरू भेट्न र उच्च पुरस्कारका लागि समुद्री डाँडा तामाङमा प्रकट हुने बेलामा तपाईंले उच्च winnings मारिरहेको उत्तेजना महसुस गर्नेछन्।
तपाईले धेरै बोनस विशेषताहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाइँ हिट गर्न चाहानुहुन्छ। विजेता €2बाट जगेपट्टि सम्म जसरी € 20000 छ! केवल नयाँ कार्ड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तीन प्रकारको जित्नको लागि मेल खाने प्रतीकहरू प्रकट गर्नुहोस्। जब तपाइँ सँग मेल खाउनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले तामाको खोला दिइएको रकम जित्न सक्नुहुन्छ। शीर्ष म्याच हिट र खरगोश तपाईंको हो।
फराकिलो समुद्र मार्फत आफ्नो मार्गमा तपाईं केवल मल्टीप्लेयरहरूको लागि जान चाहन्छ। यो जस्तो सरल छ! शुभकामना बोनस एक्स्प्रेसमा यो मनोरञ्जन खरिद कार्ड खेल खेल्दै, समुद्रलाई लियो।
समुद्रलाई जंक गर्नुहोस् अपडेट गरिएको: जनवरी 31, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 समुद्रलाई जंक गर्नुहोस्
2.0.0.1 अलास्का माछा पकडने
2.0.0.2 जादुई जंगल
2.0.0.3 इज्जत शहर को ओज सडक को जादूगर
2.0.0.4 बैंकक रात
2.0.0.5 शास्त्रीय 243
2.0.0.6 ड्रोन युद्धहरू
2.0.0.7 Fantasini: मास्टर मास्टर
2.0.0.8 लुइसियाना डबल